फेसबुकमा के पोष्ट गर्न हुन्छ, के पोष्ट गर्न हुँदैन ? – Lokpati.com
नेकपा अमेरिका नेपाल प्रहरी पक्राउ चितवन प्रचण्ड अपराध राशिफल मृत्यु केपी शर्मा ओली नेपाली काँग्रेस प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड सरकार
By लाेकपाटी न्यूज Last updated May 17, 2020
जेठ ४, काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल आम मानिसको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ। सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट नै मानिसले क्षणभरमै संसारभरिका घटनाक्रमहरु बुझ्न सक्छ। यसले सूचनाको पहुँच र मानिसको दैनिकीलाई अत्यन्तै सहज बनाइदिएको छ।
शनिबार धुलिखेल अस्पतालमा एक सुत्केरी महिलाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भयो। तर, केहीबेरमै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले मृत महिलाको नाम ठेगानासहितको बिबरण मात्र राखेनन्। मृत आमासँगै जीवित बच्चाको फोटो राखेर श्रद्धाञ्जलीसमेत दिए। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता पोष्टहरु हामी फेसबुकमा लगातारजसो देख्न सक्छौं।
सामाजिक सञ्जाल सामाजिक विषय हो, तपाईले त्यहाँ कुनै कुरा पोष्ट गरेपछि त्यो तपाईको अधीनमा रहँदैन। त्यसपछि आएका क्रिया प्रतिक्रिया सामाजिक बहसको विषय बन्छन्। कतिपय अवस्थामा तपाईले पोष्ट गरेका विषयले विवादित बन्नुपर्ने र मनोवैज्ञानिक तनाव लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। पोष्ट गर्नुअघि नै त्यसमा सोच्नु राम्रो हुन्छ।
९५ प्रतिशत नेपाली प्रयोगकर्ताले फेसबुकमा के पोष्ट गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? भन्ने कुराको हेक्का देखिँदैन। के शेयर र लाइक गर्नु हुन्छ वा हुँदैन ? भन्नेबारे पनि हेक्का राखेको देखिँदैन। त्यसकै कारण कतिपय मानिसहरु अञ्जानवश साइबर क्राइमको मुद्दा खेपिरहेका छन्।
कतिपयले आफूले चिया खाएको, खाजा खाएको, घरको किचनमा तरकारी बनाएको फोटोसमेत लगातार फेसबुकमा राखिरहेका हुन्छन्। खास विशेष कुरामा त्यस्तो फोटो राख्नु नराम्रो नहोला। तर, लगातारजसो खाएका कुरा, किचन, बेडरुम फेसबुकमा पोष्ट गर्नु राम्रो कुरा होइन। यसले तपाईको ‘प्राइभेसी’ रहँदैन।
कतिपयले मान्छे मरेको, सडक दुर्घटनामा परेका मानिसको पनि फोटो अपलोड गर्ने गरेका हुन्छन्, त्यो एकदमै नराम्रो कुरा हो। सामाजिक सञ्जालमा विक्षिप्त प्रकारका घटनाहरुको प्रत्यक्ष फोटो राख्नु हुँदैन। तर, हामीकहाँ शव जलाउँदै गरेको, मलामी जाँदै गरेको फोटो र भिडियो पनि फेसबुकमा अपलोड हुने गरेका छन्। यो एकदमै नराम्रो बानी हो।
कतिले फेसबुकमा जन्मदिनको शुभकामना दिँदा आफ्नोसमेत फोटो राख्छन्। त्यो पनि राम्रो होइन। भनिन्छ, एउटा तस्वीरले हजार शब्दभन्दा बढीको सन्देश बोल्छ। तपाई ‘क्याप्सन’ जेसुकै लेख्नुस्, फोटो विषयसँग सम्बन्धित छैन भने त्यसको अनर्थ लाग्छ। धेरै जनाको फोटो राखेपछि जन्मदिनको कसको ? तपाईको क्याप्सनले त एउटाको जन्मदिन भन्ला। तर, फोटोले त्यसो भन्दैन।
अति विशिष्ट र विशिष्ट मानिससँग आफ्नो पहुँच रहेको देखाउन कतिपयले उनीहरुसँग खिचिएका फोटोहरु बिना सन्दर्भ अपलोड गर्ने गर्दछन्। यो पनि राम्रो कुरा होइन। यसले तपाईका विरोधीले तपाईलाई फसाउने वा गलत काममा उपयोग गर्ने खतरा रहन्छ। अति विशिष्ट वा विशिष्ट मान्छेका लागि त यो झनै घातक हुन सक्छ।
जहाँ पायो, जो पायो, त्यहीसँग फोटो खिच्नु पनि राम्रो कुरा होइन। यस्ता फोटोमा सार्वजनिक पद धारण गरेका मान्छेहरु अझ बढी सचेत हुनुपर्छ। कानूनको आँखामा अभियुक्त रहेका त्यस्ता व्यक्तिसँग फोटो खिच्दा विशिष्ट व्यक्तिहरु विवादमा पर्न सक्छन्। अझ फोटो खिच्नेहरुले तपाईको फोटो ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेका हुन सक्छन्।
त्यसैगरि कसैलाई शुभकामना दिँदा, बधाइ दिँदा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र एकल फोटो राख्नु राम्रो हुन्छ। यसले पनि कसलाई बधाइ, कसलाई शुभकामना भन्ने अन्यौल हुन सक्छ। त्यस्तै विषय नखुलाई वा स्पष्ट नगरी कसैलाई बधाइ वा शुभकामना दिनु पनि राम्रो होइन।
फेसबुकमा कसैलाई व्यक्तिलक्षित गाली गर्नु, उसका व्यक्तिगत जीवनका घटनाहरुको टिप्पणी गर्नु पनि राम्रो होइन। त्यसैगरि नेता वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको फोटो बिगारेर पोष्ट गर्ने, गाली गर्ने काम पनि दण्डनीय अपराध मानिन्छ। यस्ता सामग्री पोष्ट गर्नु राम्रो कुरा होइन। पोष्ट मात्र होइन, यस्ता सामग्रीको लाइक र शेयर गर्नबाट समेत सचेत हुनुपर्छ।
फेसबुकमा म फलानो ठाउँमा जाँदैछु। म घरमा एक्लै छु जस्ता सामग्रीहरु पोष्ट गर्नु पनि राम्रो होइन। यस्ता पोष्टले अपराधीलाई पूर्वसूचनाको काम गर्दछन्। कतिपय चोरी, हत्या र बलात्कारका घटना यस्तै सूचनाका आधारमा हुने गरेका छन्। त्यसैगरि कसैसँग व्यक्तिगत रुपमा भएको विवाद वा झगडा पनि फेसबुकमा लेख्नु हुँदैन।
जाँडरक्सी सेवन गरेको, चुरोट पिएको, जुवातास खेलेको फोटो वा स्टाटस फेसबुकमा राख्नु असाध्यै नराम्रो कुरा हो। यसले तपाईको चरित्र त प्रष्टाउँछ नै, तपाईका ‘फलोअर्स’समेत गलत कामका लागि अभिप्रेरित हुन्छन्। यसले समाजमा नै विकृति ल्याउँछ। यो एकदमै गलत कुरा हो।
फेसबुकमा धेरै निरासाजनक कुरा लेख्नु पनि राम्रो मानिँदैन। आफ्ना दुख पीडाहरु त्यसरी लेख्दा तपाईका आफन्तजनसमेत दुखी हुन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरु फेसबुकमा सकभर नलेख्नु राम्रो हुन्छ।
फेसबुकमा यात्रा संस्मरण, इतिहासका अनुभव, पुस्तक पढेर लिएको ज्ञान, मित्रसँँगको सम्बन्ध र त्यसले दिएको उर्जा, कुनै राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक वा वैचारिक चिन्तन र अनुभवहरु लेख्नु राम्रो हुन्छ। यात्राको अनुभव लेख्नु राम्रो हुन्छ, कुनै ठाउँँ विशेषको सौन्दर्यताको चित्रण गर्नु राम्रो हुन्छ।
फेसबुकमा जीवनमा आफूले हासिल गरेको ज्ञान र अनुभवहरु पनि बाँड्न सकिन्छ। त्यसैगरि राम्रो बहस, भावना र साहित्यिक रचनाहरु राख्नु राम्रो हुन्छ। समग्रमा भन्दा फेसबुक सामाजिक सञ्जाल हो, त्यसमा जे कुरा राख्दा तपाई र समाजलाई लाभ हुन्छ, त्यस्ता कुरा राख्नुपर्छ। तपाई र समाजलाई हानी हुने कुरा नराख्नु नै राम्रो हुन्छ।
त्यसैगरि फेसबुक प्रयोगकर्ताले आफ्नो एकाउन्टको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। फेसबुक प्रोफाइलमा मोवाइल नम्वर, इमेल र जन्ममिति नदेखाउनु राम्रो हुन्छ। त्यसैगरि विभिन्न एपहरुको ‘टेष्ट’ गर्दा तपाईको फेसबुक ह्याक हुने खतरा रहन्छ। यस्ता कुराहरुबाट सचेत रहनुपर्छ।
फेसबुकको पासवर्ड सुरक्षाका दृष्टिले धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले पासवर्ड कहिल्यै पनि कमजोर राख्नु हुँँदैन। धेरैजसोले सम्झिन सजिलो हुने भन्दै आफ्नो मोवाइल नम्वर पासवर्डका रुपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो पासवर्डले तपाईको एकाउण्ट ह्याक हुने जोखिम बढाउँछ।
विज्ञ संलग्न र्‍यापिड रेस्पोन्स टोलीसहित मन्त्री दुलाल बाह्रबिसे जाँदै
मन्त्री पुनद्वारा चेक हस्तान्तरण
शनिबारको राशिफल: तपाईको आज कस्तो छ ?
कुन गुफा कहाँ छ ?
आइसोलेसनमा मृत्यु भएकी बालिकामा कोरोना पुष्टि, आमा पनि…